ဖုန်းပေါ်မှာအတန်းဖော်များထံမှဗီဒီယိုများဒေါင်းလုတ်လုပ်လုပ်နည်း - ဖုန်းကို - 2019
အသုံးပြုသူများက Microsoft က Excel, အမှားထဲမှာစားပွဲနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရသောအခါပေါ်ပေါက်သောပြဿနာများ၏တဦးတည်း "အရမ်းအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောဆဲလ်ကို formats" ဖြစ်ပါတယ်။ တိုးချဲ့မှု XLS နှင့်အတူစားပွဲနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါဒါဟာအထူးသဖြင့်ဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ရဲ့ပြဿနာရဲ့အနှစ်သာရကိုကြည့်ရှုပါကဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်အရာကိုနည်းလမ်းရှာဖွေကြပါစို့။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Excel ကိုအတွက်ဖိုင်အရွယ်အစားလျှော့ချဖို့ဘယ်လို
အမှားပြင်ရန်အတွက်မည်သို့နားလည်စေရန်, သငျသညျ၎င်းငျး၏အနှစ်သာရကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ တိုးချဲ့မှုနှင့်အတူ Excel ကို XLSX ဖိုင်တွေစာရွက်စာတမ်းများတွင် 64,000 ကို formats နှင့်အတူနှင့် XLS extension ကိုအပေါ်တစ်ပြိုင်နက်စစ်ဆင်ရေးထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို - သင်တို့သည်ဤကန့်သတ်ကျော်လွန်ခဲ့လျှင်သာ 4000. , ဒီအမှားတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ပုံစံအောက်မှာကွဲပြားခြားနားသောပုံစံချပေးဒြပ်စင်များ၏ပေါင်းစပ်ဖို့ကိုရည်ညွှန်း:
ထို့ကြောင့်, တစ်ကြိမ်ဆဲလ်ပေါင်းများစွာကို formats အတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စာရွက်စာတမ်းအလွန်အကျွံပုံစံချပေးရာတွင်အသုံးပြုသည်ဆိုပါကပဲအမှားတွေဖြစ်ပေါ်စေပေလိမ့်မည်။ ကိုယခုဤကိစ္စကိုဖြေရှင်းရန်မည်သို့ကိုကြည့်ကြပါစို့။
Method ကို 1: extension ကို XLSX နှင့်အတူဖိုင်တစ်ဖိုင်ချွေတာ
အဖြစ်ပြီးသား extension ကို XLS စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပုံစံများသာ 4000 ယူနစ်များ၏တပြိုင်နက်တည်းစစ်ဆင်ရေးထောက်ခံပါတယ်။ ဒီအမှားအများစုသူတို့ကိုကြုံတွေ့လျက်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုရှင်းပြထားသည်။ ပုံစံချပေးဒြပ်စင် 64000 နှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းအလုပ်ပံ့ပိုးသောပိုမိုခေတ်မီစာရွက်စာတမ်း XLSX အတွက်စာအုပ်တွေပြောင်းတစ်ခုအမှားအထက်တွင်ရည်ညွှန်းမတိုင်မီအထိအဆ 16 ပိုရှည်သည်ဤဒြပ်စင်ကိုအသုံးပြုဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ tab ကိုမှဖွင့် "File".
ထို့ပြင်လက်ဝဲဒေါင်လိုက် Menu ထဲမှာ, ပစ္စည်းအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Save As ကို".
ပြေးဖိုင်ကို window ကို save လုပ်ပါ။ ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားရာအရပျထဲမှာ save မဟုတ်, တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသော hard disk ကို directory ကိုသွားအားဖြင့်အရင်းအမြစ်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်သောနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ထိုလယ်၌ "File name ကို" ဆန္ဒရှိလျှင်သင်သည်၎င်း၏အမည်အားပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒါပေမဲ့ဒီတစ်လိုအပ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ settings က default အဖြစ်ကျန်ရစ်စေနိုင်သည်။ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်လယ်၌ "File အမျိုးအစား" တန်ဖိုးပြောင်းလဲသွား "Excel ကို 97-2003 စာအုပ်" အပေါ် "Excel ကိုစာအုပ်"။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, ဒီလယ်ပြင်ပေါ် click နှိပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့စာရင်းထဲကသင့်လျော်သောအမည်အားရွေးချယ်ပါ။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖျော်ဖြေပြီးနောက်ကျနော်တို့ခလုတ်ကိုနှိပ် "Save".
အခုတော့စာရွက်စာတမ်းက extension ကို XLS နှင့်အတူဖိုင်တစ်ခုပေါ်တွင်အလုပ်မှာထက်, တစ်ချိန်တည်းမှာကို formats ၏ကြီးမားသော 16 ကြိမ်အရေအတွက်ကိုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တံ့သော extension ကို XLSX, ဖြင့်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်, ဒီနည်းလမ်းကိုကျနော်တို့လေ့လာနေသောအမှားဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။
Method ကို 2: တစ်ဦးအချည်းနှီးသော string ကိုမှကို formats ၏သန့်ရှင်းရေး
အသုံးပြုသူ extension ကို XLSX အတူလုပ်ကိုင်သောအခါတိုင်အဆရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူနေဆဲဒီအမှားတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကစာရွက်စာတမ်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါ 64000 ကို formats ၏အတားအဆီးကိုကျော်လွန်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်မှာ, သင် extension ကို XLS နှင့်အတူဖိုင်အမည်ကိုကယ်ဖို့လိုတဲ့အခါဖြစ်နိုင်သည်အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်, XLSX နှင့်မ, ပထမဦးဆုံးအဖြစ်ဥပမာ, ပိုပိုပြီး Third-party အစီအစဉ်များအလုပ်လုပ်နိုင်ကြသည်။ ဤအမှုကိစ္စများတွင်, သင်သည်ဤအခြေအနေကိုအထဲကနောက်ထပ်နည်းလမ်းရှာတွေ့နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အနာဂတျမှာစားပွဲ၏ချဲ့ထွင်၏အမှု၌ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ်အချိန်ဖြုန်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မကြာခဏအများအပြားအသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးရဲ့ margin အတူ table ထဲမှာနေရာတစ်နေရာ format လုပ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ဒီလုံးဝမှားချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယျတျောနှငျ့အလုပျကိုဆင်းနှေးကွေးသောကြောင့်ဒီအလွန်တိုးတက်ဖိုင်အရွယ်အစား၏, မှတပါး, ထိုကဲ့သို့သောအရေးယူကြှနျုပျတို့သညျဤချည်အတွက်ဆွေးနွေးရန်သောမှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေမည်။ ထို့ကြောင့်, ထိုကဲ့သို့သောအလွန်အကျွံထံမှဖယ်ရှားပစ်ရသင့်ပါတယ်။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာကျနော်တို့ data တွေကိုလည်းမရှိသည့်အတွက်ပထမဦးဆုံးအတန်းနှင့်အတူစတင်စားပွဲအောက်ကတစ်ခုလုံးကိုဧရိယာကိုမီးမောင်းထိုးပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် panel ကို၏ဒေါင်လိုက်သြဒီနိတ်ပေါ်မှာဤလိုင်းများ၏ကိန်းဂဏန်းအမည်ပေါ်တွင်လက်ဝဲဘက် mouse ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ရွေးချယ်ရေးတစ်ခုလုံးကိုလိုင်းလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ button ကိုပုံနှိပျပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သည် ကို Ctrl + Shift + ဆင်းမြှား။ စားပွဲအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာရွက်အပြည့်အဝအကွာအဝေးဖြစ်သည်။
ထိုအခါ tab ကိုမှ navigate "အိမ်" နှင့်ဖဲကြိုးပေါ်မှ icon လေးပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ "Clear ကို"ဒီ tool box ထဲမှာတည်ရှိပါတယ်ဘယ်ဟာ "တည်းဖြတ်ခြင်း"။ ရာထူးရွေးချယ်ဖို့ရာမှတစ်ဦးစာရင်းဖွင့်လှစ် "Clear ကိုဖောမတ်ချ".
ပထမဦးဆုံးကော်လံ၏အမည်အားဖြင့် Klatsat ယင်းကိုသြဒိနိတ် panel ကိုအတွက်ဒေတာနှင့်ပြည့်စုံသည်မဟုတ်။ ဒါဟာအောက်ဆုံးမှဖြန့်ချိသည်။ ထို့နောက် key ကိုပေါင်းစပ်အစုတခုထုတ်လုပ်ရန် ကို Ctrl + Shift + ညာဘက်မြှား။ ဤသည်စားပွဲ၏ညာဘက်မှစာရွက်စာတမ်း၏တစ်ခုလုံးကိုအကွာအဝေးထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထို့နောက်ယခင်အမှု၌ရှိသကဲ့သို့, အိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Clear ကို"ထိုအ drop-down menu မှာတစ်ခု option ကို select လုပ်ပါ "Clear ကိုဖောမတ်ချ".
မှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်အခါ, ကြှနျုပျတို့သညျဤသင်ခန်းစာတွင်အကြောင်းပြောနေတာကြသည်ထိုသို့သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ပထမတစ်ချက်မှာစားပွဲ၏ညာဘက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနှင့်ရန်ပ္ပံကို format မပုံရသည်ရင်တောင်သုံးစွဲဖို့ပိုမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့သညျ "ဝှက်ထားသော" ကို formats ဖြစ်နိုင်သည်ဟူသောအချက်ကို။ ဥပမာ, ဆဲလ်ထဲမှာစာသားသို့မဟုတ်နံပါတ်များကိုမဖွစျစခွေငျးငှါ, ဒါပေမယ့်သူကတစ်ဦးရဲရင့်စာလုံးပုံစံကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်, etc မှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လျှင်ထိုအကြောင်းကြောင့်ပင်ထင်ရသောဗလာပ္ပံရက်နေ့တွင်, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထွက်သယ်ဆောင်, ပျင်းရိမဖွဘူး။ ဒါ့အပြင်ဝှက်ထားသောအတန်းနှင့်ကော်လံ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းကိုမမေ့မလြော့ပါ။
Method ကို 3: စားပွဲပေါ်မှာအတွင်းကို formats မဖျက်ပစ်
ယခင်မူကွဲပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မကူညီဘူးဆိုပါကစားပွဲအတွင်းမလိုအပ်သောပုံစံချပေးမှသတိထားရမှာကျိုးနပ်သည်။ အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ကမည်သည့်အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်မခံပါဘူးပင်ရှိရာ, ထိုပုံစံချပေးစားပွဲပေါ်မှာပါစေ။ သူတို့ကစားပွဲပေါ်မှာပိုပြီးလှပစေသည်ထင်ပေမယ့်တကယ်တော့အတော်လေးမကြာခဏအလားတူပုံစံဒီဇိုင်းကနေတော်တော်လေးအရသာမရှိသောလှပါတယ်။ ဤအမှုအရာတို့ကို၎င်းအစီအစဉ်ကိုသို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကိုဖော်ပြရန်ထားတဲ့မှားယွင်းမှုတစ်ခု၏တားစီးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလျှင်, တောင်မှပိုဆိုး။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျစားပွဲပေါ်မှာသာတကယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ပုံစံကိုစွန့်ခွာသင့်ပါတယ်။
ယင်းပုံစံချပေးလုံးဝဖယ်ရှားနိုင်သည့်အတွက်သူများပ္ပံ၌၎င်း, ဒါကြောင့်ယခင်နည်းလမ်းမှာဖော်ပြထားတဲ့ခဲ့တူညီ algorithm ကိုပေါ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလုပ်ဆောင်စားပွဲများ၏သတင်းအချက်အလက်များအကြောင်းအရာကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်။ ပထမဦးဆုံးအသန့်ရှင်းခံရဖို့ရာအတွက် table ထဲမှာအကွာအဝေးကိုရွေးပါ။ စားပွဲပေါ်မှာအလွန်ကြီးမားသည်ဆိုပါက, သို့ဖြစ်လျှင်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းခလုတ်များပေါင်းစပ် အသုံးပြု. လုပ်ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည် ကို Ctrl + Shift + ညာဘက်မြှား (လက်ဝဲမှ, ထ, နှိမ့်ချ) ။ သငျသညျအရှင်စားပွဲပေါ်မှာအတွင်းဆဲလ်ကို select လျှင်, ထိုဒေတာများကိုသော့ကိုရှေးခယျြသုံးပြီးယခင်နည်းလမ်း၌ရှိသကဲ့သို့စာရွက်၏အဆုံးတိုင်အောင်အသာအတွင်း လုပ်. မရပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါအကျွမ်းတဝင်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Clear ကို" tab ကို "အိမ်"။ drop-down list ထဲမှာတစ်ခု option ကို select လုပ်ပါ "Clear ကိုဖောမတ်ချ".
သည်ထို့နောက်လုပ်ဖို့တစ်ခုတည်းသောအရာ - စားပွဲကဲ့သို့သောအကွာအဝေး၏ကျန်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်လျှင်, သန့်အပိုင်းအစ၏နယ်နိမိတ်ကိုမြဲမြံစေရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါပေမဲ့ဒီ option ကိုစားပွဲပေါ်မှာအချို့ဒေသများတွင်အဘို့အသင့်လျော်ဘူး။ ဥပမာ, အခြို့သောအကွာအဝေးတွင်, သငျသညျမဟုတ်ရင်ဒေတာကိုမှန်ကန်စွာပြသ, border နှင့်အခြားဒြပ်စင်များဖြစ်မည်မဟုတ်, အဝစွာကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ရက်စွဲပုံစံစွန့်ခွာသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှု၏တူညီသောသင်တန်း, လုံးဝပုံစံချပေးဖယ်ရှားပေးပါသည်။
ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာတစ်လမ်းဖြစ်၏, ဤအမှု၌, သို့သော်, ဒါကြောင့်အချိန်ပိုမိုစားသုံးသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်အသုံးပြုသူတစ်ပုံစံတည်းကို format ဆဲလ်တစ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုခွဲဝေချထားပေးရန်နှင့်ကိုယ်တိုင်သင်ပြုနိုင်သည့်မပါဘဲပုံစံ, clean up လုပ်ဖို့ရပါလိမ့်မယ်။
စားပွဲပေါ်မှာလည်းကြီးမားသည်လျှင်၏သင်တန်း, ဒီ, ရှည်ခြင်းနှင့်လောကီလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။ စာရွက်စာတမ်း "လှပသော" အလွဲသုံးစားမဟုတျပါဘူး, ဒါကြောင့်သင်အချိန်အများကြီးဖြုန်းဖို့ရှိသည်တံ့သောဖြေရှင်းခံရဖို့ပြဿနာများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသည့်အခါဒါကြောင့်ချက်ချင်း သာ. ကောင်း၏။
Method ကို 4: ခြွင်းချက်ပုံစံချပေး၏ဖယ်ရှားရေး
conditional ဖောမတ်ချ - အလွန်အဆင်ပြေဒေတာ visualization tool ကို, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအမှားကိုလေ့လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်, ခြွင်းချက်ပုံစံချပေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေများစာရင်းကိုကြည့်ရှုစာရွက်သက်ဆိုင်ခြင်းနှင့်သင်ပြုနိုင်သည့်မပါဘဲအနေအထား, ကနေဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ tab မှာတည်ရှိပြီး "အိမ်", Klatsat button ကို "အခြေအနေကတော့ဖောမတ်ချ"ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်ဘယ်ဖြစ်ပါသည် "Styles"။ ဤ action ပြီးနောက်ဖွင့်လှစ်သောမီနူးထဲမှာ, select လုပ်ပါ "စည်းကမ်းများစီမံခန့်ခွဲရန်".
အဆိုပါစာရင်းထဲတွင် default ကိုသာရှေးခယျြရေးပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။ စာရွက်ပေါ်မှာရှိသမျှစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖော်ပြရန်အလို့ငှာ, switch သည်သေတ္တာနေရာ "အဘို့အ Show ကို format နဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို" အနေအထား "ဒီစာရင်း"။ ထို့နောက်လက်ရှိစာရွက်သားအပေါငျးစညျးမဉျြးစညျးကမျးပြသပါလိမ့်မည်။
ထိုအခါသင်ပြုနိုင်သည့်မရှိဘဲစည်းမျဉ်း, select လုပ်ပါ, နှင့် button ကို click "စည်းမျဉ်းကိုဖျက်မည်".
ဤနည်းအားဖြင့်, ကျနော်တို့အချက်အလက်များ၏အမြင်အာရုံအမြင်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှမစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြည့်စုံပင်ဖြစ်သည်ပြီးနောက် button ကို click "အိုကေ" ပြတင်းပေါက်၏အောက်ခြေတွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို Manager က.
ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အခြေအနေကတော့ဖောမတ်ချ" ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက် "Styles" tab ကို "အိမ်"။ ပေါ်လာသော list ထဲမှာတစ်ခု option ကို select လုပ်ပါ "စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖျက်ပစ်ပါ"။ ထို့နောက်တစ်ဦးထက်ပိုသောစာရင်းဖွင့်လှစ်။ ကမှာကို item ကို select "ရွေးချယ်ထားဆဲလ်ကနေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖျက်ပစ်ပါ".
သငျသညျလုံးဝခြွင်းချက် Formatting, မီနူးစာရင်းကိုရွေးချယ်ဖို့အဆုံးစွန်သောလိုအပ်ကြောင်းကိုဖယ်ရှားလိုပါလျှင် "စာရင်းထဲကအားလုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို Remove".
Method ကို 5: ထုံးစံစတိုင်များကိုဖျက်
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဤပြဿနာကြောင့်ထုံးစံစတိုင်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကများအသုံးပြုခြင်းမှဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်တခြားစာအုပ်တွေထဲကနေတင်သွင်းမှုသို့မဟုတ်မိတ္တူ၏ရလဒ်အဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဤပြဿနာကိုရှင်းလင်းစေပါတယ်။ ကျနော်တို့ tab ကိုမှဖွင့် "အိမ်"။ အဆိုပါ Tools များအပိုင်းအတွက်ဖဲကြိုး, တွင် "Styles" အုပ်စုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဆဲလ် Styles".
မီနူးစတိုင်များ။ ဒီနေရာမှာတကယ်တော့, သည်အများအပြားကို formats ၏ fixed ပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်းဆဲလ်၏ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များကိုယ်စားပြုနေကြသည်။ စာရင်း၏ထိပ်ဆုံးမှာပိတ်ပင်တားဆီးမှုဖြစ်ပါသည် "အကောက်ခွန်"။ ကိုယ့်ဒေတာစတိုင်များမူလက Excel ကိုစတည်ဆောက်ထားသဖြင့်, အသုံးပြုသူရဲ့လုပ်ရပ်များ၏ထုတ်ကုန်များမှာကြသည်မဟုတ်။ မှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လျှင်, ငါတို့သည်လေ့လာနေထားတဲ့၏ဖျက်သိမ်းရေး, ကသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အကြံပြုသည်။
အဆိုပါပြဿနာကိုသင်သီးခြားစီသူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီကိုဖျက်ပစ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရန်မ built-in tool ကို, စတိုင်များကိုဖျက်ပစ်လည်းမရှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အုပ်စုများ၏သီးခြားစတိုင်လ်ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ် "အကောက်ခွန်"။ ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးဆက်စပ် menu ထဲက option ကို select လုပ်ပါ "ကိုဖျက် ... ".
ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမှဤထုံးစံကိုတစ်ဦးချင်းစီစတိုင် Remove "အကောက်ခွန်"သာ embedded Excel ကိုစတိုင်များအချိန်အထိ။
Method ကို 6: ထုံးစံကို formats ၏ဖယ်ရှားရေး
စတိုင်များ၏ဖယ်ရှားရေးများအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရန်အလွန်ဆင်တူထုံးစံကို formats ၏ဖယ်ရှားရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့ Excel ကိုအတွက် default အနေဖြင့် embedded ကြသည်မဟုတ်သည့်ပစ္စည်းများ, ဖယ်ရှားရန်, နှင့်အသုံးပြုသူအကောင်အထည်ဖော်သို့မဟုတ်အခြားလမ်းတစ်စာရွက်စာတမ်းသို့ပေါင်းစည်းပါလိမ့်မည်။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာကျနော်တို့ကို format window ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ စာရွက်စာတမ်းများတွင်မဆိုအရပ်ပေါ်မှာ Right-click နှိပ်ပြီးနှင့်ဆက်စပ် menu ထဲက option ကို select လုပ်ပါ - ဒီလိုလုပ်ဖို့အသုံးအများဆုံးလမ်း "Format ကိုဆဲလ် ... ".
သင်က tab ကိုရှိနေစဉ်လည်းလုပ်နိုင် "အိမ်"အဆိုပါခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Format ကို" ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက် "ဆဲလ်" အဆိုပါတိပ်ပေါ်မှာ။ အဆိုပါ Run ကိုမီနူးထဲမှာ, select လုပ်ပါ "Format ကိုဆဲလ် ... ".
ကျွန်တော်ပြတင်းပေါက်၏ညာဘက်ကိုခေါ်နောက်ထပ် option ကို - က keyboard shortcuts တွေကိုအစုတခုဖြစ်ပါသည် ကို Ctrl + 1 ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားခဲ့ကြသောပြုမူသောအမှုတစုံတခုကိုဖျော်ဖြေပြီးနောက်ပုံစံဝင်းဒိုးကိုစတင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ tab ကိုမှဖွင့် "နံပါတ်"။ အဆိုပါ parameter သည်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု "နံပါတ်ကို formats" installation ကို switch ကိုအနေအထားကိုထုတ်လုပ် "(အားလုံးအရွယ်အစား)"။ ပြတင်းပေါက်၏ညာဘက်အခြမ်းတွင်ဤစာရွက်စာတမ်းများတွင်အသုံးပြုကြသည်ပစ္စည်းများကိုအပေါငျးတို့သအမျိုးအစားများစာရင်းကိုလည်းမရှိသည့်အတွက်လယ်ပါပဲ။
အဆိုပါ cursor သူတို့တစ်ဦးစီကိုရွေးချယ်ပါ။ လာမယ့်နာမတော်ကိုရွှေ့သော့သုံးစွဲဖို့အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်ပါတယ် "Down" သွားလာမှုပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ။ ပစ္စည်း built လျှင်, ခလုတ် "ကိုဖျက်" စာရင်းတစ်ခုမလှုပ်ရှားဖြစ်လိမ့်မည်။
အသုံးပြုသူက Element button ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ရရှိသောပြီးတာနဲ့ "ကိုဖျက်" တက်ကြွဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ အလားတူပင်ထုံးစံပုံစံချပေးများ၏စာရင်းအားလုံးကိုအမည်များကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါလိုအပ်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပြီးစီးပြီးနောက် "အိုကေ" ပြတင်းပေါက်၏အောက်ခြေတွင်။
Method ကို 7: မလိုအပ်သောစာရွက်များ၏ဖယ်ရှားရေး
ထို့အပြင်သတင်းအချက်အလက်ကော်ပီပွားယူသည်အဘယ်မှာရှိသည့်မလိုအပ်သောစာရွက်သို့မဟုတ်စာရွက်များ, ကဖယ်ရှားပစ်ရန် သာ. ကောင်း၏။ ဒါဟာအတော်လေးရိုးရှင်းစွာပြုမိသည်။
ညာဖက်ပြ status bar အထက်စွန့်ပစ်ဖယ်ရှားရမည်ဖြစ်သောတံဆိပ်စာရွက်, ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ထို့ပြင်ပေါ်လာသော menu ကထဲမှာ, select လုပ်ပါ "ကိုဖျက် ... ".
ဒီဖြတ်လမ်းပယ်ဖျက်ဖို့အတည်ပြုချက်ကိုလိုအပ်သည်တစ်ဦးပေးတဲ့ dialog box ကိုပွီးနောကျ။ အထဲတွင်ခလုတ်ကိုအပေါ်ကျနော်တို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ကိုဖျက်".
သငျသညျအများအပြားဆက်တိုက်တံဆိပ်များကိုဖျက်ပစ်ချင်လျှင်, လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်သူတို့နှင့်အတူ၏ပထမဦးဆုံးပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ, အဲဒီနောက်နောက်ဆုံးပေါ် click လုပ်ပေမယ့်ကိုသာအဓိကသော့ကိုင်ထားစဉ် အဆိုင်း။ ဒေတာဒြပ်စင်အကြားတည်ရှိသောတံဆိပ်များအားလုံးကိုရွေးချယ်သည်။ နောက်ထပ်ဖယ်ရှားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအထက်တွင်ဖော်ပြထားခဲ့တူညီ algorithm ကိုပေါ်ထွက်ယူသွားတတ်၏။
ဒါပေမယ့်လည်းစာရွက်များကိုဝှကျထားနေကြပြီး, ပဲသူတို့ကိုကွဲပြားခြားနား၏ format ဒြပ်စင်၏အတော်လေးကြီးမားတဲ့အရေအတွက်ကရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအစာရွက်များပေါ်တွင်အလွန်အကျွံပုံစံချပေးကိုဖယ်ရှားသို့မဟုတ်ပင်သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်, သင်ချက်ချင်းတံဆိပ်များကိုပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဆက်စပ် Menu ထဲမှာဆိုဖြတ်လမ်းပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ, အကို select လုပ်ပါ "Show".
ဝှက်ထားသောစာရွက်များများစာရင်းကိုဖွင့်လှစ်။ ဝှက်ထားသောစာမျက်နှာ၏အမည်အားရွေးချယ်ပါနှင့် button ကို click "အိုကေ"။ အဲဒီနောကျက panel ကိုအပေါ်ပြသပါလိမ့်မည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ဝှက်ထားသောစာရွက်များနှင့်အတူဤလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ရန်။ ထိုအခါမှသာသူတို့နှင့်အတူအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုကြည့်ရှု: လုံးဝဖယ်ရှားပြီးဒါမှမဟုတ်ပိုလျှံပုံစံချပေးရာမှသန့်စင်, သူတို့အပေါ်မှာသတင်းအချက်အလက်အရေးကြီးပါတယ်လျှင်။
ဒါပေမယ့်ကင်းသောအနေဖြင့်သင်ရှာမည်မဟုတ်ပုံမှန်အတိုင်းဝှက်ထားသောစာရွက်များစာရင်းပြုစုသောဒါခေါ် superskrytye စာရွက်များသည်လည်းရှိသေး၏။ သူတို့ကသာ VBA အယ်ဒီတာမှတဆင့်ပြသမှု panel ကိုအပေါ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ VBA အယ်ဒီတာ (မက္ကရိုအယ်ဒီတာ) ကိုစတင်, hotkey ကိုကလစ်နှိပ်ပါ alt + F11။ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက် "စီမံကိန်း" စာရွက်၏နာမတော်ကို select လုပ်ပါ။ ဤတွင်ဒါဝှက်ထားသောနှင့် superskrytye သာမန်မြင်နိုင်စာရွက်များအဖြစ်ပြသထားပါသည်။ အောက်ပိုင်းဧရိယာထဲမှာ "Properties ကို" ကျနော်တို့ parameter သည်တန်ဖိုးကိုကြည့်ရှု "မြင်နိုင်"။ အဲဒါကို set လျှင် "2-xlSheetVeryHidden"ထိုအခါဒီ superskryty စာရွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပေါ်လာသော list ထဲမှာဒီ parameter သည်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ, နာမည်ကို select "-1-xlSheetVisible"။ ထိုအခါ window ၏အနီးကပ် button ကို click လုပ်ပါ။
ဤ action ပြီးနောက်ရွေးချယ်ထားစာရွက် superskrytym ဖြစ်ငြိမ်းလိမ့်မည်နှင့်၎င်း၏တံဆိပ်အတွက် panel ကိုအပေါ်ပြသနေသည်။ အဲဒါကို Next ကိုတစ်သန့်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားထွက်သယ်ဆောင်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ခန်းစာကို: အဘယျသို့ Excel ကိုအတွက်ပျောက်ဆုံးနေစာရွက်များလျှင်
သငျသညျ, ဒီလေ့လာမှုသင်ခန်းစာအတွက်အမှားအယွင်းများဖယ်ရှားပစ်ရအမြန်ဆုံးနှင့်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ - က extension ကို XLSX နှင့်အတူဖိုင်ကို re-သိမ်းဆည်းပါ။ သို့သော်ဤ option ကိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူးလျှင်, ဒါမှမဟုတ်တချို့အကြောင်းပြချက်ထို့နောက်ပြဿနာဖြေရှင်းရေး၏အခြားနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုသူများထံမှအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအများကြီးလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, fit ပါဘူး။ ထို့အပြင်သူတို့အားလုံးပေါင်းစပ်ရာတွင်အသုံးပြုခံရဖို့ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ပိုလျှံပုံစံချပေးအလွဲသုံးစားမစာရွက်စာတမ်းအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် သာ. ကောင်း၏, ဒါကြောင့်သင်အမှားအယွင်းများဖျက်သိမ်းရေးအပေါ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမရှိကြပါဘူး။
ဗီဒီယို Watch: စမတဖနန 360-degree ဓတပတ ဘယလရကမလ (စက်တင်ဘာလ 2019).